गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गरेको आरोपमा ३५ वर्षको जेल सजाय पाएकी चेल्सी म्यानिङले जेलमुक्त भएपछि आफ्नो पहिलो फोटो इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक गरेकी छन्। लिंग परिवर्तन गरेर चर्चित बनेकी र सात वर्ष जेलमा बिताएकी चेल्सी म्यानिङलाई ह्वाइट हाउसबाट विदा हुँदै गर्दा बाराक ओबामाले माफी दिएका थिए।
सन् २०१० मा इराकमा पक्राउ परेकी चेल्सीले बग्दादमा अमेरिकी सेनाले हेलिकप्टरबाट गोली प्रहार गरी रोयटर्सका पत्रकारको हत्या गरेको भिडियोसहित लाखौँ गोप्य दस्तावेज विकिलिक्ससम्म पु¥याएकी थिइन्। बुधबार उनी जेलमुक्त भएको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ।
‘ओके, सो हियर आइ एम एभ्रीवन!’ उनले इन्स्टाग्राम पोस्टमा लेखेकी छन्।
जेलमुक्त भएपछिको आफ्नो पहिलो फोटोमा उनी छोटो कपाल र रातो लिपस्टिकमा देखिएकी छन्।
मात्र चार ओटा पोस्ट गरेकी चेल्सीको इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा ४४ हजार फलोअर्स पुगिसकेका छन् भने उनको फोटोलाई २३ हजारभन्दा बढीले लाइक गरेका छन्।
पोस्टमा कमेन्ट गर्ने धेरैले उनको बहादुरीको प्रशंसा गरेका छन्। कतिपयले पुरुषबाट महिला बनेकी चेल्सीको सौन्दर्यको समेत प्रशंसा गरेका छन्।
तीजको पूर्बसन्ध्यामा आयो तीज भिडियो मोबाईल एप - Nepali Teej Songs Video	सन्जीब पुडासैनीको गीतमा देव र एलिशा राईको मस्ती – भिडियो सहित	महिलाको शरीर किन ‘कर्भी’ हुन्छ? द इकोनोमिस्ट	यी हुन् आँखा फर्फराउनुका शुभ र अशुभ संकेत : These are the eyes of the good and bad signs	यसरी पाउनुहोस् गुगलबाट २ करोडभन्दा बढीको पुरस्कार	पाइन्टको गोजीमा मोवाइल राख्ने कि नराख्ने ? पुरुषले जान्नै पर्ने कुरा	घाँटी दुख्ने र स्वर बस्ने समस्याले बोल्न गाह्रो भयो ? जान्नै पर्ने ५ घरेलु उपाय : Sore throat and voice problems who find it difficult to speak? Hereafter, the5domestic measures	‘माझी बस्ती’मा स्वेताले सुरु गरिन् घर निर्माण, गरियो भव्य स्वागत: श्रीकृष्णको तस्बिर छुदै खाइन् एउटा कसम !	झुठा समाचार नियन्त्रण गर्न फेसबुकको सिस्टममा व्यापक परिवर्तन - False news Control System wide changes to Facebook	किन यी युवतीले राखिन् करोड मूल्यमा आफ्नो भर्जिनिटी बिक्रीमा ?	बीबीसीका प्रस्तोताले अन्तर्वाताका क्रममा महिलाको स्तन छोएपछि…हेर्नुस् भिडियो ! BBC presenter copsafeel + getsaslap! (16May17)	टिप्स/जानकारी : यस्ता छन् हाई हिलले निम्त्याउने समस्या : These are problems caused by high heels	Useful Links Websites